ပုသိမ်ကြီးမြို့တွင် ပထမဆုံး နာရီစင်ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
ပုသိမ်ကြီးမြို့တွင် ပထမဆုံး နာရီစင်ဖွင့်လှစ်
ပုသိမ်ကြီး၊ ဧပြီ ၂၁
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့အဝင် ပုသိမ်ကြီး-မန္တလေးလမ်းမကြီး ဘေးတွင် မြို့ဂုဏ်ဆောင် ပထမဆုံး နာရီစင်ကို ဧပြီ ၂၁ ရက်နံနက် ၈ နာရီကဖွင့်လှစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖွင့်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာဇော်မြင့်မောင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦး အောင်ကျော်ဦး၊ မန္တလေးမြို့တော် ဝန်ဒေါက်တာ ရဲလွင်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက် တာသန်းဝင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်ဦးရဲမင်းဦးတို့က ဖဲကြိုး ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာဇော်မြင့်မောင်က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍နာရီစင်တည် ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဦးရဲမင်းဦးက နာရီစင်ဖြစ် ပေါ်လာပုံအကြောင်း ရှင်းလင်းပြော ကြားပြီး နာရီစင်ဖြစ်ပေါ်စေရန် လှူဒါန်းခဲ့ကြသည့် အလှူရှင်များ အား ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ကြသည်။
ပုသိမ်ကြီးမြို့ဂုဏ်ဆောင် ပထ မဆုံးနာရီစင်ကို ၂ဝ၁၈ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ နာရီစင်အား မြန်မာ့မှုလက်ရာများဖြင့် တန်ဆာ ဆင်ကာ ဘုံသုံးဆင့်ပါဝင်ပြီး အမြင့် ၃၆ ပေခွဲရှိကြောင်းနှင့် နာရီစင်တည် ဆောက်ရေး မှတ်တမ်းများပါဝင် သည့် ကမ္ပည်းမော်ကွန်းကျောက်စာ တိုင်ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော် မြင့်မောင်က နံ့သာရေပက်ဖျန်းဖွင့်လှစ် ပေးကြောင်း သိရသည်။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း လေးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ဇာတိမာန်ကလေး သတင်းစာ အခမဲ့?
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် သံဃာတစ်ပါး မောင်းလာသော ယာဉ် တိမ်းမှောက်၊ သံဃာနှစ်ပါး ပျံလွန်ေ?
ချင်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၆ဝ ပြန်လည် ထုတ်ချေး
ဇန်နဝါရီ ဈေးကွက်အတွင်း ကစားသမားသစ် အားဖြည့်ရန် မလိုဟု ဆမ်အလာဒိုက် ဆို
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း FOB စနစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် နည်းပညာ အဓိက လိုအပ်